आलोचक -लघुकथा | paniphoto
पानीफोटो	November 18, 2011	Post navigation
-मुक्तिनाथ घिमिरे-अखबारमा खबर छापियो– ‘केन्द्रीय पुस्तकालयमा निरन्तर नौ वर्ष एक अध्येता शोधको सिलसिलामा धाइरहेका छन् ।’ उनी सीमान्तकृत वर्गका व्यक्ति भएको र देशको एक प्रमुख राजनीतिक दलका पूर्व केन्द्रीय नेता भएको विवरण पनि समाचारमा सामेल थियो । उक्त समाचारले राम्रै चर्चा बटुल्यो । प्रतिक्रियामा स्वरहरू घनीभूत भए । भोलिपल्ट अखबारमा पाठकपत्र त्यही समाचारसँग सम्बन्धित आए ।
प्रबुद्ध राजनीतिक चिन्तकले लेखे– नेपालमा पनि अब चिन्तन गर्ने प्रवृतिको सुरुआत ठूलो सङ्ख्यामा हुनेछ ।
नामुद विश्लेषकले प्रतिक्रिया दिए– विश्लेषणको अभावमा मुर्झाएका दलका नेताले उनीबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
प्रसिद्ध प्राध्यापकले विचार पोखे– अर्काको शोधपत्र सार्ने पद्धति मौलाएकै समयमा सच्चा शोधार्थीको यो उच्च नमुना अनुकरणीय छ ।
विश्वविद्यालयका एक बूढा विद्यार्थीले आफुलाई उनको कार्यबाट हरेस खान नहुने प्रेरणा मिलेको विचार व्यक्त गरे ।
योगगुरु योगानन्दले नौ वर्षसम्म अध्ययनमा निर्लिप्त हुनु योग गर्नु सरह हो भने ।
प्रतिक्रियाका सयौँ आवाजहरूमध्ये एक आवाज यस्तो थियो– नौ–नौ वर्षसम्म केन्द्रीय पुस्तकालयको अध्ययनकक्ष ओगट्ने ती व्यक्तिको व्यक्तिवादी चरित्र आलोच्य छ । सम्बन्धित पक्षले उक्त कक्ष अन्य अध्येताका लागि उपलब्ध गराउन उनलाई त्यहाँबाट तुरुन्त निकाल्नु आवश्यक छ ।सबैले चिने यो आवाज आलोचकको थियो । Tweet
This entry was posted in साप्ताहिक साहित्य. Bookmark the permalink.	8 thoughts on “आलोचक -लघुकथा”	विकाश says:	November 20, 2011 at 10:05 am	यसलाई त आलोचक भन्दा पनि केपी ओलीचक भन्दा ठिक हुन्छ जस्तो पो लाग्यो । ठ्याक्कै केपीओलीको शैलीमा भन्दा रैछन् । जे मा पनि नराम्रो मात्रै देख्ने । खाली एउटी विद्या राम्री ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Reply	विकाश says:	November 20, 2011 at 10:05 am	यसलाई त आलोचक भन्दा पनि केपी ओलीचक भन्दा ठिक हुन्छ जस्तो पो लाग्यो । ठ्याक्कै केपीओलीको शैलीमा भन्दा रैछन् । जे मा पनि नराम्रो मात्रै देख्ने । खाली एउटी विद्या राम्री ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Reply	मन्दिप says:	November 20, 2011 at 10:06 am	फटाहा मोरो आँखा चिम्लेर प्रतिक्रिया दिने होला । कुरै नबुझी ।
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Reply	Ratna Bd Thami says:	November 20, 2011 at 10:06 am	nice story, sweet and short
कमेन्ट कस्तो लाग्यो ?:00	Reply	Ma pani Nepali says:	November 20, 2011 at 10:13 am	nepalko ani nepali ko baani astai chha.